အဘယ်ကြောင့်သတ္တုသံချေးနှင့်သံချေးကိုဖယ်ရှားရန်အဘယ်ကြောင့်? - Mibond စက်ပစ္စည်း
နေအိမ် / သတင်း / ဘလော့ / အဘယ်ကြောင့်သတ္တုသံချေးနှင့်သံချေးကိုဖယ်ရှားရန်အဘယ်ကြောင့်?
views:100 Author:ဆိုက်ကို Editor ကို အချိန် Publish: 2021-08-12 မူလ:ဆိုက်ကို
သံချေးသံချေး၏အဓိကအကြောင်းရင်းမှာလျှပ်စစ်ဓာတ်အားပြတ်တောက်မှုနှင့်လေထုအောက်စီဂျင်ဖြစ်သည်။ အကယ်. ၎င်းသတ္တုတွင်အညစ်အကြေးများပိုမိုပါ0င်ပါကဤအညစ်အကြေးများသည်သတ္တုနှင့်ဓာတုဓာတ်အားပေးစက်စက်ဖြင့်သတ္တုဓာတ်များကိုဖြစ်ပေါ်စေပြီးသတ္တုအောက်ဆိုဒ်တစ်ခုဖြစ်ပေါ်စေရန်သတ္တုဓာတ်ကိုဓာတ်တိုးစေလိမ့်မည်။ အလူမီနီယမ်အောက်ဆိုဒ်ကဲ့သို့သောသတ္တုများသည်သတ္တု၏နောက်ထပ်ဓာတ်တိုးမှုကိုကာကွယ်ရန်သံချေးပြီးနောက်အောက်ဆိုဒ်တစ်ခုကိုဖြစ်ပေါ်စေလိမ့်မည်။ အချို့သောသတ္တုများအနေဖြင့်ထုတ်လုပ်သောအောက်ဆိုဒ်မှထုတ်လုပ်သောအောက်ဆိုဒ်သည်သံချေးကဲ့သို့သောသတ္တု၏ဓာတ်တိုးမှုကိုအရှိန်မြှင့်သည်။
1 ။လေထု၏ဆွေမျိုးစိုထိုင်းဆ။ လေထုစိုထိုင်းဆသည်စိုထိုင်းဆစိုစိုစိုစိုစိုစိုစိုစိုစိုခြင်းထက်ပိုမိုမြင့်မားသောအခါသတ္တုမျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်ရေရိုက်ကူးခြင်းသို့မဟုတ်မျက်ရည်စက်များပေါ်လာသည်။ အကယ်. လေထုထဲတွင်ပါရှိသောအန္တရာယ်ရှိသောအညစ်အကြေးများသည်ရေရိုက်ကူးခြင်းနှင့်ရေစက်စက်များတွင်ပျော်ဝင်ပါက၎င်းသည်ချေးခြင်းကိုပိုမိုပြင်းထန်လာစေသော electrolyte ဖြစ်လာသည်။
3 ။ဆာလ်ဖာဒိုင်အောက်ဆိုဒ်ကဲ့သို့ညစ်ညမ်းသောလေထုထဲတွင်လောင်ကျွမ်းသောဓာတ်ငွေ့များသည်အထူးသဖြင့်သံမဏိ, ကြေးနီနှင့်၎င်း၏သတ္တုစပ်များအတွက်အကြီးမားဆုံးသက်ရောက်မှုရှိသည်။
4 ။လေထုထဲတွင်မီးခိုး, ကျောက်မီးသွေး, ကလိုနာရီ, အခြားအက်စစ်များ, အယ်ကာလတ်များ, အချို့သည်သူတို့ကိုယ်သူတို့ကတဖြည်းဖြည်းစားကြသည်။ သို့မဟုတ်ရေစက်များ၏အရေအတွက်ဖြစ်သောငွေ့ရည်ဖွဲ့ကပင်။
သတ္တုမျက်နှာပြင်များပေါ်တွင်သံချေးဖယ်ရှားရန်နည်းလမ်းများစွာရှိသည်။ အမျိုးမျိုးသောသတ္တုပစ္စည်းများအတွက်မျက်နှာပြင်ပေါ်ရှိသံချေးသည်ကွဲပြားခြားနားသည်။ ထို့ကြောင့်သံချေးကိုဖယ်ရှားရန်နည်းလမ်းသည်လည်းကွဲပြားခြားနားသည်။ Electroplating နှင့်ပန်းချီကဲ့သို့သောကွဲပြားခြားနားသောမျက်နှာပြင်အင်ဂျင်နီယာနည်းပညာများသည်မျက်နှာပြင်သံချေးဖယ်ရှားခြင်းအတွက်ကွဲပြားခြားနားသောလိုအပ်ချက်များရှိသည်။ ထို့ကြောင့်သံချေးဖယ်ရှားရေးနည်းလမ်းကိုအမှန်တကယ်ရွေးချယ်သောအခါသင့်လျော်သော Rust ဖယ်ရှားရေးနည်းလမ်းနှင့်လုပ်ငန်းစဉ်နှင့်တိကျသောမျက်နှာပြင်အင်ဂျင်နီယာများ၏လိုအပ်ချက်များကိုရွေးချယ်သင့်သည်။
အသုံးများသော Surface Derusting Method များတွင်ဓာတုပေါင်းသင်းခြင်း, ultrasonic, လျှပ်စစ်,
1 ။manual derusting နည်းလမ်း
Manual Dalusting လုပ်ငန်းစဉ်သည်ရိုးရှင်းပြီးကုန်ကျစရိတ်သက်သာသည်, အထူးသဖြင့်စက်မှုလုပ်ငန်းအပင်များနှင့်သံမဏိဖွဲ့စည်းမှုများကိုနည်းစနစ်အရ derusted မဖြစ်နိုင်ပါ။ သံချေးကိုလက်ဖြင့်ဖယ်ရှားသောအခါသင်ကဲ့သို့သောစက်ပိုင်းဆိုင်ရာကိရိယာအချို့ကိုလည်းသင်ငှားနိုင်သည်Micro Diy Grinder,minateure ထောင့်ကြိတ်စက်နှင့်တူးစင်အတွက်သတ္တုကြိတ်ဆုံ.
စက်မှုလုပ်ငန်းပြတ်တောက်ခြင်း (sandblasting, သေနတ်များအပါအ0င်ဖိအားမြင့်မားခြင်း, ဖိအားမြင့်မားခြင်း, အထူးသဖြင့်အကြီးစားအဆောက်အ ဦ များနှင့်ပစ္စည်းကိရိယာများကိုကြိုတင်ပြင်ဆင်ခြင်းအတွက်စက်ယန္တရားသံချေးဖယ်ရှားခြင်းနည်းလမ်းသည်သံချေးဖယ်ရှားခြင်းနှင့်စွမ်းဆောင်ရည်ရှိသည်။ ဤလုပ်ငန်းစဉ်တွင်အသုံးပြုသောကိရိယာများသည်အဓိကအားဖြင့်ပါဝင်သည်ကြီးမားသော rotary ပိုလန်,ပိုလန်စက် grindနှင့်variable ကိုမြန်မြန် policer.
အဆိုပါဓာတုနှစ်မြှုပ်ခြင်းနည်းလမ်းသည်သတ္တု workpiece ကိုသက်ဆိုင်ရာချေးငွေဖယ်ရှားရေးဖြေရှင်းနည်းတွင်စိမ်ရန်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်အက်စစ်နှင့်အယ်ကာလီအကြားရှိဓာတုဓာတ်ပြုမှုနှင့်0န်ဆောင်မှုမျက်နှာပြင်ပေါ်ရှိသံချေးထုတ်ကုန်များနှင့်အောက်ဆိုဒ်ပမာဏနှင့်အောက်ဆိုဒ်ပမာဏနှင့်အကြားဓာတုဓာတ်ပြုမှုကိုအသုံးပြုသည်။ ထို့အပြင်အောက်ဆိုဒ်စကေးနှင့်သံချေးထုတ်ကုန်များသည်သံချေးဖယ်ရှားခြင်း၏ရည်ရွယ်ချက်ကိုအောင်မြင်ရန်ဖြေရှင်းနည်းတွင်ဖျက်သိမ်းလိုက်သည်။
ဓာတုနှစ်မြှုပ်ခြင်းနည်းလမ်းသည်သေးငယ်သောအလုပ်ခွင်ကိုသံချေးဖယ်ရှားခြင်းအတွက်အသုံးပြုသောနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ အားသာချက်မှာသံချေးဖယ်ရှားခြင်းမြန်နှုန်းသည်လျင်မြန်စွာဖြစ်ပြီးအကျိုးသက်ရောက်မှုမှာသိသာထင်ရှားသည်။ အထူးသဖြင့်ရှုပ်ထွေးသောပုံစံများနှင့်အတူအစိတ်အပိုင်းများအတွက်, ထိုကဲ့သို့သောတွင်းတွင်းနှင့်အခေါင်းပေါက်များကဲ့သို့သောအသေကောင်များတွင်သံချေးအချို့ကိုဖယ်ရှားနိုင်သည်။ဤလုပ်ငန်းစဉ်ကိုကူညီသင့်သည်rotary ပွန်းစားကိရိယာအစုံနှင့်Rotary Tool ကို polishing ကိရိယာအစုံ.
4 ။ဓာတုစိမ်နှင့် ultrasonic နည်းလမ်း
သံချေးခြင်းဖြင့်သံချေးခြင်းဖြင့်ဖယ်ရှားသည့်အခါ Ultrasonic ကိုတစ်ချိန်တည်းတွင်မိတ်ဆက်ပါကသံချေးဖယ်ရှားခြင်း၏အမြန်နှုန်းနှင့်အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုတိုးတက်စေနိုင်သည်။ သံချေးဖယ်ရှားပေးသည့်အရည်များ၌မရေမတွက်နိုင်သောပူဖောင်းများကိုထုတ်လုပ်ရန် Ultrasonic တုန်ခါမှုစွမ်းအင်ကိုအသုံးပြုခြင်း။ ဤသေးငယ်သောပူဖောင်းများသည်ကြီးထွားလာပြီးနီးကပ်လာသည့်အခါ, သံချေးသည်အကူအညီဖြင့်ခြစ်ခြစ်ထားသည်Rotary ဖြတ်တောက်ခြင်း tool ကိုနှင့်Mini Grinder Tool.
စက်မှုဝါဒအတွက်ကိရိယာများအဓိကအားဖြင့် DIY Tools GT220 Rotary Tool Kit Tools rotary Tools နှင့် Power Toint Rindary Grants Gits set (12V 236PCs)
Micro Diy Grinder minateure ထောင့်ကြိတ်စက် တူးစင်အတွက်သတ္တုကြိတ်ဆုံ ကြီးမားသော rotary ပိုလန် ပိုလန်စက် grind variable ကိုမြန်မြန် policer rotary ပွန်းစားကိရိယာအစုံ Rotary Tool ကို polishing ကိရိယာအစုံ Rotary ဖြတ်တောက်ခြင်း tool ကို Mini Grinder Tool